Ny OneDrive dia nohavaozina manolotra fanohanana ireo rakitra GIF | Vaovao IPhone
Ny rindrambaiko fitehirizan'ny rahona an'ny Microsoft, tsikelikely dia nanjary safidy hafa ho an'ny mpampiasa maro izay nampiasa Dropbox indrindra, indrindra noho ny habaka fitahirizana lehibe natolony raha vao manokatra kaonty izy ireo. Fa koa ny fampidirana feno miaraka amin'ireo rindranasa Office 365 sy Office misy amin'ny rafitra rehetra, ataovy ho fampiharana mety indrindra ho an'ireo mpampiasa an-tapitrisany izay mampiasa ny efitrano fiasan'ny Microsoft. Ireo tovolahy avy any Redmond, lavitra ny mandao ny fangatahana fitehirizana, manohy miasa amin'izy ireo manampy asa vaovao hanamora ny fitantanana karazana rakitra rehetra.
Ny fanavaozana ny OneDrive farany dia manome antsika mifanentana amin'ireo rakitra GIF mihetsika, mba hahafahantsika manao asa miaraka amin'izy ireo, asehoy haingana izy ireo fa tsy aseho ny sary mijanona izay naneho tamintsika hatramin'izao. Ho fanampin'izay, ity fanavaozana vaovao ity dia mamela antsika hanova kaonty vetivety ao anatin'ny segondra vitsy monja. Mba hanaovana izany dia mila manindry sy mitazona ny Anarako fotsiny aho, mba hiseho ny kaonty rehetra izay nampiasainay teo aloha tamin'ny fampiharana.
Nohararaotin'i Microsoft ny famoahana ity fanavaozana ity, izay laharana 8.8.9, ho ahitsiho ny lesoka asehonay anao etsy ambany:
Hadisoana izay nahatonga ny mpampiasa sasany tsy afaka nahita ny topi-maso mivantana tamin'ny fampiharana.
Hadisoana ny zava-nitranga izay nitranga rehefa nanandrana nanokatra rakitra PDF tao amin'ny kaonty Server SharePoint.
Microsoft dia niavaka hatrany, farafaharatsiny tato ho ato, avy amin'i henoy ireo mpampiasa ny fisoratanao, mpampiasa izay manome soso-kevitra tsy tapaka ny fanatsarana na ny fanovana ny rindranasan'ny orinasa izay tsy misy ifandraisany amin'ny Office, satria, ndao hatrehana izany, sarotra be ny mahita asa iray izay tsy vitan'ny sasany amin'ireo rindranasa ao amin'ny Microsoft office suite.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny OneDrive dia nohavaozina manolotra fanohanana ireo rakitra GIF
Fa maninona no mahomby tokoa ny doka Apple?
Ny mpanamboatra fitaovana Apple TV dia afaka manao zavatra bebe kokoa ankehitriny